Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.4 Tsy feno
Na firy na firy ny tahiry lehibe misy anao, dia mety tsy manana ny vaovao tianao izy.
Ny loharanom-baovao lehibe indrindra dia tsy feno , amin'ny heviny fa tsy manana ny vaovao izay tianao ho an'ny fikarohana. Izany dia singa iraisan'ny fampahalalana izay noforonina ho an'ny tanjona hafa noho ny fikarohana. Mpahay siansa sôsialy maro no efa nahita ny traikefa momba ny tsy fahatanterahana, toy ny fanadihadiana iray izay tsy nanontany ny fanontaniana nilaina. Indrisy anefa, ny olana amin'ny tsy fahatanterahana dia mihamafy kokoa amin'ny angona lehibe. Raha ny zava-niainako, betsaka ireo angona lehibe izay mitranga fa tsy ampy ny karazana fampahalalana telo ilaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy: vaovao momba ny demografika momba ny mpandray anjara, ny fitondrantena amin'ny sehatra hafa, ary ny angon-drakitra mba hampandehanana ny asa fanorenana.
Amin'ireo karazana telo tsy manam-pahataperana, ny olan'ny tsy fahatanterahana amin'ny fampandehanana ny fanorenana teorika dia sarotra indrindra hamahana azy. Ary amin'ny zava-niainako, matetika dia tsy ampoizina tsinontsinona. Ny tontolon'ny teôlôjika dia hevitra mibaribary fa ny mpahay siansa sosialy dia mianatra sy manatanteraka asa fanorenana ny teôlôjika izay manolo-kevitra ny fomba hisamborana an'io fananganana amin'ny tahirin-kevitra hita maso io. Mampalahelo fa matetika dia tena sarotra ny manao izany fihetsika tsotra izany. Ohatra, eritrereto hoe manandrana manandrana manandrana mamantatra ny filazana tsotra fa ny olona izay manan-tsaina kokoa dia mahazo vola bebe kokoa. Mba hitsapana ity fanambarana ity, mila mandanjalanja ny "faharanitan-tsaina" ianao. Fa inona ny faharanitan-tsaina? Gardner (2011) fa misy karazana valo amin'ny endriny samy hafa. Ary moa ve misy fepetra mety handrefesana tsara ny iray amin'ireo karazana faharanitan-tsaina ireo? Na eo aza ny asa goavam-be ataon'ny mpitsabo psikology, mbola tsy voavaly ireo fanontaniana ireo.
Noho izany, na dia sarotra tsotra fotsiny aza - ireo olona izay mahira-tsaina kokoa no mahazo vola bebe kokoa - dia mety ho sarotra ny manombantombana ara-pihetseham-po satria sarotra ny manatanteraka ny fanorenana teorika amin'ny angon-drakitra. Ny ohatra hafa momba ny fanorenana teorika izay manan-danja fa sarotra ny miasa dia ahitana ny "fitsipika," "renivola sosialy," ary "demokrasia." Ireo mpahay siansa sosialy dia miantso ny lalao eo amin'ny fanorenana ny toetr'andro sy ny fanamafisana ny momba ny fananganana data (Cronbach and Meehl 1955) . Satria ity lisitra fohy momba ny fananganana ity dia manolotra, ny fananganana ny fahamendrehana dia olana izay nisedra ny siantifika sosialy nandritra ny fotoana lava be. Saingy eo amin'ny traikefako, ny olana amin'ny fametrahana ny fahamendrehana dia bebe kokoa rehefa miasa miaraka amin'ny angona tsy noforonina ho an'ny tanjona fikarohana (Lazer 2015) .
Rehefa maminavina ny valin'ny fikarohana ianao, dia misy fomba haingana sy ilaina hanamarinana ny fahamendrehana mamorona ny vokatra, izay matetika no lazaina amin'ny sehatrasa fanorenana, ary maneho azy indray amin'ny fampiasana ireo angona ampiasaina. Diniho, ohatra, ny fandinihana ara-pitsipi-pitondran-tena roa izay mihambo ho mampiseho fa ny olona mahira-tsaina kokoa dia mahazo vola bebe kokoa. Tamin'ny fanadihadiana voalohany, nahita ny mpikaroka fa ireo olona izay mitazona tsara ny Test Raven Progressive Matrices - fanandramana fantatry ny mpahay siansa (Carpenter, Just, and Shell 1990) , izay nitatitra fa ambony kokoa ny vola miditra. Tamin'ny fanadihadiana faharoa, nahita ny mpikaroka fa ireo olona ao amin'ny Twitter izay mampiasa teny lava kokoa dia mety hanonona marika marika. Amin'ireo tranga roa ireo, ireo mpikaroka ireo dia afaka milaza fa nasehon'izy ireo fa ny olona izay manan-tsaina kokoa dia mahazo vola bebe kokoa. Na izany aza, amin'ny fianarana voalohany, ny fanorenana teôlôjika dia mazàna miasa amin'ny angon-drakitra, raha amin'ny faharoa dia tsy izy ireo. Ankoatra izany, araka ny asehon'ity ohatra ity dia betsaka kokoa ny angon-drakitra tsy mamaha olana amin'ny fametrahana ny marina. Tokony hisalasala ny vokatry ny fanadihadiana faharoa ianao raha nahitana tweet an-tapitrisany, sioka iray tapitrisa, na bitsika iray tapitrisa. Ho an'ireo mpikaroka tsy mahafantatra tsara ny fananganana ny fahamendrehana, ny tabilaly 2.2 dia manome ohatra sasantsasany momba ny fanadihadiana izay nampiasa ny fanorenana teorika amin'ny fampiasana angon-drakitra nomerika.
Tabilao 2.2: Examples of Diaspora Digital izay nampiasaina mba hampandehanana ny fiorenana teorika
Ny tetik'asa teoria
Mailaka avy amin'ny oniversite (meta-data fotsiny) Fifandraisana ara-tsosialy Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
Ny media sosialy dia navoaka tao amin'ny Weibo Civic engagement Zhang (2016)
Mamoaka rakitra avy amin'ny orinasa (meta-data and complete text) Fifandraisana ara-kolontsaina amin'ny fikambanana iray Srivastava et al. (2017)
Na dia sarotra be aza ny hamaha ny olana eo amin'ny sehatra tsy feno, dia misy vahaolana mahazatra amin'ny karazana tsy fahatanterahana hafa: tsy ampy ny demografika sy ny vaovao tsy feno momba ny fitondran-tena amin'ny sehatra hafa. Ny vahaolana voalohany dia ny fanangonana ireo angona ilainao; Hilaza aminareo momba izany aho ao amin'ny toko faha-3 rehefa milaza aminareo momba ny fanadihadiana aho. Ny vahaolana faharoa dia ny manao izay lazain'ny mpahay siansa momba ny fampidiran-dresaka sy ny sioka sosialy. Amin'izany fomba izany, ireo mpikaroka dia mampiasa ny fampahalalana izay ananany amin'ny olona sasany mba hanova ny toetran'ny olona hafa. Ny vahaolana fahatelo azo atao dia ny mampifandray loharano maro. Ity dingana ity indraindray dia antsoina hoe firaketana an-tsoratra . Ny metamoroko ankafiziko indrindra tamin'ity dingana ity dia nosoratan'i Dunn (1946) ao amin'ny fehintsoratra voalohany amin'ny taratasy voalohany nosoratany tamin'ny firaketana an-tsoratra:
"Ny olona tsirairay eto an-tany dia mamorona bokin'ny fiainana. Ity boky ity dia manomboka amin'ny fahaterahana ary mifarana amin'ny fahafatesana. Ny pejiny dia mirakitra ny firaketana ireo zava-nitranga fototra teo amin'ny fiainana. Ny fifandraisana an-tsoratra dia ny anarana nomena ny dingan'ny fanangonana ny pejin'ity boky ity. "
Rehefa nanoratra an'io andininy io i Dunn, dia nihevitra izy fa ny bokin'ny fiainana dia mety ahitana ny foto-piainana lehibe toy ny fahaterahana, ny fanambadiana, ny fisarahana ary ny fahafatesana. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ny fampahalalana betsaka momba ny olona, ​​ny bokin'ny fiainana dia mety ho sary tsara tarehy, raha toa ka afaka mifamatotra ireo pejy samihafa (izany hoe ny sainam-pirinty nomerika). Ity bokin'ny fiainana ity dia mety ho loharano lehibe ho an'ny mpikaroka. Saingy, mety azo antsoina koa hoe tahirim-pahavoazana (Ohm 2010) , izay azo ampiasaina amin'ny tanjona tsy araka ny antonony rehetra, araka izay hamaritako azy ao amin'ny toko faha-6 (Ethics).